Gaazaa, Isaa'el, Caamsaa 14, 2021
Walitti bu’iinsi guyyoota shaniif ture gara waraansa guutuutti ce’uu mala yaaddoon jedhu hammaataa waan adeemee fi Israa’e hidhattoota Faalsxiin irratti haleellaa geggeessituuf loltoota lafoo dabaltee jirt
Gareen hidhate kan hamaas gama Israa’elitti rookkeettii waan furguggiseef jecha Israa’el naannoo dugdee Gaazaa warra Faalisxiiniin to’atamu irratti haleellaa madfii fi qilleensa irraani waan geggeessiteef gam lamaanuu walitti dhukaasaa turan.
Dubbi himaan waraana Israa’el akka jedhanittiIsraa’el xayyaarawwan waraanaa 160 fi murna waraana lafoo birgeedii sadii akkasumas taankiiwwan gargaaramuun haleellaa sana geggeessite.
Humnoonni Itisaa Israa’el loltoonni isaa yeroo ammaa dugdee Gaazaa haleelaa jira jechuun ergaa Tweeter maxxanseen beeksise. Booda irra immoo quunnamtiin keessoo wal dha’uu maqaa dha’uu dhaan loltoonni isaa Israa’el keessaa meeshaa gurguddaa dhukaasuu isaanii ibsee jira.
Lentenaant Joonaattan Konriikus akka jedhanitti Israa’el Gaazaa irratti kan fuuleffatteef waggoottan darban keessa Holqa Hamaas tolche ilaalchisee ti. Jiraattonni Gaazaa kanneen naannoo daangaa Israa’el waliin jiru irra jiraatan Rooyitersiif akka mirkaneessanitti naannoo isaanii loltoonni Israa’el hin argaman, garuu meeshaalee gurguddaan hedduu fi haleellaan samii irraan raawwatamuu ibsaniiru.
Lola guyyootaa booda, golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa yaaddoo Yunaayitid Isteetis biraa dhiyaateen karoorri wal ga’ii sana geggeessuu boodatti erga harkifatee booda dilbata dhuftu wal ga’uun haala jiru irratti mari’achuuf walii galee jira.
Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis roobii darbe Israa’el ofii ishee irraa ittisuuf mirga qabdu deggeruu isaanii ibsanii, lolli sun dafee raawwata abdii jedhu qabaachuu isaanii illee beeksisaniiru.